Amakhwenkwe abuyele edolophini nguLizzy Thin - Izinto Zobugcisa
Amakhwenkwe abuyele edolophini nguLizzy Thin
Ibhalwe yinkokheli yeqela uPhil Lynott, 'Amakhwenkwe abuyile edolophini' abonakalisa ukuzola oku-Tiz Lizzy kunye neengcambu zabasebenzi. Ingoma yayiyindlela yokunxibelelana nabalandeli babo, ababenemvakalelo efanayo.
U-Lizzy o-Thin wayehlala evusa inkathazo kwaye aphele elwa-iindlela zabo babekhethwe ngokusekwe kwinxalenye yezakhono zabo zokuzonwabisa. Eli qela lalisela kakhulu kwaye laqhuma. Ingoma yaba likhadi labo lokufowuna.
Le ndlela yokuphila yamphatha kakubi uLynott, owasweleka ngo-1986 eneminyaka engama-36 emva kokuba umzimba wakhe waphuka ngenxa yokusebenzisa iziyobisi notywala gwenxa.
Le yayiyingoma ebaluleke kakhulu kaLizzy o-Thin, owayesemilenzeni yabo yokugqibela xa yabetha. Ngo-1972, babebethwa ngumoya kwilizwe labo laseIreland ngohlobo lwabo ' Iwhisky engqayini , 'kodwa khange bakwazi ukuyilandela kwaye abakwazanga ukwenza isifotho eMelika. Babenamatyala kwaye ileyibhile yabo, i-Phonogram, yayikulungele ukubalahla xa bengabuyanga Ukuqhekeka kwejele icwecwe. 'Amakhwenkwe abuyele edolophini,' akhululwe njengowokuqala ongatshatanga, wabanika into abayifunayo kwaye bayiseka eMelika, intengiso enkulu yamaqela erock. Ngale nyawo, ii-albhamu zabo ezilandelayo zazingabathengisi abaqinileyo, ngakumbi e-UK, kwaye bandise uluhlu lwabo njengesenzo esiphilayo.
Abantu baseManchester, eNgilani, baya kukuxelela ukuba 'Amakhwenkwe abuyile edolophini' malunga neGrey Street Street, ishishini lolwaphulo-mthetho elingafaniyo neMafia. UPhil Lynott wachitha ixesha elininzi lobutsha bakhe eManchester, apho umama wakhe wayebaleka iklabhu ebizwa ngokuba yi Showbiz. I-QSG yayihlala ixhonywe phaya, ihlala 'inxibe ukubulala' (babebizwa njalo ngenxa yendlela ababecinga ngayo).
Ilungu eliphambili leqela lemigulukudu yayinguJimmy 'Weed' Donnelly, umxholo wengoma ekwi-albhamu elandelayo ka-Thin Lizzy ebizwa ngokuba ngu 'Johnny The Fox Udibana noJimmy The Weed.'
Ibha yeDino kunye neGrill ekhankanywe kwingoma mhlawumbi yindawo eyinyani, kodwa yeyiphi eyenzelwe ingxoxo. I-Deno yayiyiklabhu yasebusuku yaseManchester iQela leQela leQela lalihlala lihlala; I-Dino's Lodge yayiyi-cabaret yaseHollywood enomxholo kaDean Martin (uMartin wayengumlingani kwishishini). Iyabonakala kwiikhredithi zokuvula zoluhlu lweTV 77 Ukutshona kwelanga .
Isiselo sasiza kuhamba kuwo omabini amaziko, kodwa ukuba ujonga indawo apho igazi liza kuphalala, ngokuqinisekileyo yayinguDeno.
Oku kusetyenzisiwe kwinani lezentengiso zeTV kule minyaka idlulileyo, kubandakanya amabala eWrangler, Chase amakhadi etyala, kunye neeApplebee.
U-Everclear wakugubungela oku kwifilimu ka-1999 Isixeko saseDetroit Rock . Inguqulelo yabo yasetyenziswa kamva kumdlalo bhanyabhanya Ibali likaKnight .
'Amakhwenkwe abuyele edolophini' adlala kwiziqendu ezine ze Kusoloko kunelanga ePhiladelphia . Ikwabonisa kolu luhlu lweTV:
IiSimps ('Singin' kwiNdlela '- 2017)
Ngaphezulu ('Incwadi yabaGwetyiweyo' - 2015)
IHawaii ezintlanu-0 ('UKuka'awale' - 2015)
Idolophu yaseCougar ('Zonke izizathu ezingalunganga' - 2010)
Kwaye kwezi bhanyabhanya:
Izinto zokwenza ngaphambi kokuba ube nama-30 (2005)
Imfazwe yeTrojan (1997)
Amatywina oMkhosi wamanzi (1990)
U-Lizzy omncinci wamangaliswa xa oku kwaba linyathelo labo - kuba bebengayifuni kubo Ukuqhekeka kwejele icwecwe. Guitarist Scott Gorham ukhumbula ukuba Iliwa lakudala : 'Sasidlala kwiklabhu ethile e-US xa umphathi wethu engena esithi,' Ewe, kujongeka ngathi sinokubetha. ' Sasifana, 'Yiphi ingoma?' Ngokukrakra, besingenalo nofifi lokuba yeyiphi ingoma ebisithathile. '
Ukukuxelela inyani, ekuqaleni besingazukubeka 'Amakhwenkwe abuyele edolophini' kwi Ukuqhekeka kwejele i-albhamu konke konke, 'uqhubeke. 'Emva koko ukhethe iingoma ezili-10 kwaye wahamba nazo ngenxa yesithintelo sexesha levinyl.'
'Sirekhode iingoma ezili-15, kwaye kwezili-10 esizikhethileyo, ibingezozinye zazo,' wongeze watsho uGorham. Kodwa abaphathi beva kwaye bathi, 'Hayi, ikhona into elungileyo ngale ngoma.' Nangona emva phaya, yayingekabikho amawele egitare kuyo. '
ujohn meyer ulinde kwihlabathi ukutshintsha iingoma
zithetha ntoni ezingama-222
oh ndingumvukeli nje ngokukhaba ngoku
Iingoma zindithatha ezindleleni zekhaya